राेचक खबर Archives - Purbeli News
चाउचाउ मात्रै खुवाएपछि पत्नीसँग सम्बन्धबिच्छद !
बिहिबार, जेठ २६, २०७९
नयाँ दिल्ली / चाउचाउ कतिपयका लागि प्रिय खानेकुरा हुनसक्छ । धेरैले हतारको समयमा खाजाको लागि चाउचाउ उपर्युक्त मान्न सक्छन् । तर, भारतमा भने चाउचाउकै विषयलाई लिएर एक व्यक्ति श्रीमतिविरुद्ध सम्बन्धबिच्छेदका लागि बढेका छन् । दैनिक खानामा चाउचाउ मात्रै दिएपछि एक पतिले श्रीमतीविरुद्ध सो कदम चालेको एउटा अदालतका न्यायाधीशले बताएका हुन् । श्रीमतीले ब्रेकफ...
किशोर मारेको अभियोगमा साँढे हिरासतमा !
बुधबार, जेठ २५, २०७९
खार्तुम / एउटा अनौठो घटनामा दक्षिण सुडानमा एक १२ वर्षीय किशोरलाई मारेको अभियोगमा प्रहरीले साँढे र त्यसको मालिकलाई हिरासतमा लिएको छ । इन्डिपेन्डेन्टका अनुसार गत साता साँझको समयमा फार्मबाट फर्किने क्रममा साँढेले बालकलाई हिर्काएको थियो । साँढेको चोटले बालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । प्राप्त विवरणअनुसार उक्त घटनाअघि सो जनावरले लेक्स स्टेटमा हलो जो...
सुरिलो स्वरका कारण प्रख्यात बनेको बाघ
सोमबार, जेठ २३, २०७९
एजेन्सी । रुसको एक चिडियाघरमा आजकल एक बाघ आफ्नो सुरिलो स्वरका कारण प्रख्यात बनेको छ । विटास नामको आठ महिनाको यो बाघ अमुर प्रजातिको हो । यो प्रजातिका बाघ सबैभन्दा ठूला, तेज र चलाख हुन्छन् । विटासलाई जब आफ्नी आमाको ध्यान खिच्नुपर्छ, तब ऊ गाउन सुरु गर्छ । विटासले चराले सुसेलेको जस्तै आवाज निकाल्छ । सर्बियाको बरनाल चिडियाखाना बस्ने विटासको आवाज कतिप...
माछा मार्ने व्यक्तिको मुखभित्र नदीबाट उफ्रिएको माछा पसेपछि…
शनिबार, जेठ २१, २०७९
थाइल्याण्ड / थाइल्यान्डका एक मानिसको घाँटीमा अड्किएको माछा निकाल्नका लागि आपतकालीन शल्यक्रिया भएको छ । सो माछा पानीबाट उफ्रिएर उनको मुखमा पसेको थियो । सुन्दा नाटकीय लाग्ने सो घटनामा फत्तालुङ प्रान्तमा माछा मार्ने क्रममा अकस्मान एउटा माछा ती व्यक्तिको मुखभित्र पसेको थाइ सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । माछा भित्र पसेपछि उनी निसासिएका थिए । श्वा...
आफैसँग विवाह गर्दैछिन् यी भारतीय युवती, अभिभावले दिए आर्शीवाद
नयाँ दिल्ली / सोलोगामी अर्थात यस्तो वैवाहिक समारोह जहाँ मानिसहरूले आफैंसँग विवाह गर्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा पश्चिमा देशमा सोलोगामी युवतीमाझ बढ्दो फेसनमा छ । अहिले यो भारतसम्म आइपुगेको छ । पश्चिमी राज्य गुजरातको वडोदरा सहरको एउटा मन्दिरमा ११ जुनको साँझमा परम्परागत हिन्दू समारोहबीच क्षमा बिन्दुको विवाह हुँदैछ । रातो दुलहीको पोशाकमा सजिँदै हातमा म...
कागजस्तो यो चरा जसले निर्णय गर्दा चर्को आवाज निकाल्छ
लन्डन / ज्याकडाहरूले ‘लोकतान्त्रिक’ प्रक्रिया प्रयोग गरेर कहिले सामूहिक रूपमा आफ्नो वासस्थान छाड्ने भन्ने निर्णय गर्ने वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन् । हजारौं ज्याकडाहरू अचानक जाडोमा बिहानको आकाशमा जान सक्छन् । गुँड छोड्न चाहेमा चराहरुले बेस्सरी आवाज निकाल्ने अनुसन्धानकर्ताहरुले पत्ता लगाएका छन् । जब आवाज एकदम चर्काे तहमा पुग्छ, यसले संकत गर्छ कि ...
सोमबार, जेठ ०२, २०७९
नयाँ दिल्ली / विवाह गरेको ६ वर्षपछि पनि नातिनातिना नजन्माएको भन्दै भारतको उत्तराखण्डका एक दम्पतीले आफ्नो एक मात्र छोरा र बुहारीविरुद्ध मुद्दा हालेका छन् । ६१ वर्षीय सञ्जीव प्रसाद र ५७ वर्षीय साधना प्रसादले आफ्नो छोरालाई हुर्काउन, पाइलटको तालिम दिन र भव्य विवाहको लागि आफ्नो बचत खर्च गरेको बताउँछन् । एक वर्षभित्र नातिनातिना नजन्माए छोरा बुहारीले...
तीन सन्तान जन्माउनेलाई १८ लाख पुरस्कार, १ वर्ष छुुट्टी
आइतबार, बैशाख २५, २०७९
कतिपय कम्पनीहरू आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीको हितका लागि विभिन्न नयाँ-नयाँ नीति तथा योजनाहरु ल्याउने गर्दछन् । एउटा कम्पनीको यस्तै नीति आजकल निकै चर्चामा छ । उक्त कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तिनवटा बच्चा जन्माउनका लागि प्रोत्साहित गरिरहेको छ । यदि कुनै कर्मचारीले तेश्रो बच्चा जन्माएमा उसलाई करिब १८ लाख रुपैयाँ पुरस्कार मात्र होइन एक वर्षको छुट्ट...
११९ बर्षको उमेरमा विश्वकै जेष्ठ नागरिकको निधन
विश्वकै सबैभन्दा जेष्ठ नागरिकको ११९ बर्षको उमेरमा निधन भएको छ । जापानका सरकारी अधिकारीहरुले सोमबार दिएको जानकारीअनुसार सन् १९०३ मा जन्मिनु भएकी काने ताकानाको मृत्यु भएको हो । उहाँ जन्मेको वर्ष राइट दाजुभाइले पहिलो पटक उडान परीक्षण गरेका थिए भने पहिलो महिला नोवेल पुरस्कार विजेताका रुपमा म्यारी क्युरीले नोवेल पुरस्कार प्राप्त गर्नु भएको थियो ।जापा...
मिनिसोटा / मिनिसोटाको ट्र्याप परिवार आधिकारिक रूपमै विश्वकै सबैभन्दा अग्लो परिवार हो । परिवारको औषत उचाई ६ फिट ८ दशमलब ०३ इन्च छ । क्रिसी ट्र्याप भन्छिन् उनी परिवारकै फुच्ची सदस्य हुन् । ६ फिट ३ इन्च उचाइकी उनी निश्चय नै औषत महिलाभन्दा अग्ली छिन् । तर, परिवारमा भने उनी वास्तवमै डल्ली देखिन्छिन् । उनका पति स्कट ६ फिट ८ इन्च अग्ला छन् । जबकी उनका...